Filed under: ရုပ်ရှင်, ဝတ္ထုတို — 16 Comments
>း) ဟားဟား သဘောကျတယ်အစ်ကိုခံစားထားတာ တကယ်လူများလားလို့နောက်မှ မိုက်တယ်ဗျ သဘောကျတယ်း)အစ်ကို့အကောင့်ကိုလက်ခံထားတယ်အစ်ကိုရေး)
>ကိုချမ်းရေ…… အရေးအသားလေးကတော့ တကယ်ပြောင်မြောက်ပါတယ်။ မထမတော့ ခံစားချက်လေး များလား လို့ထင်လိုက်တာ။ နောက်မှ သဘောပေါက်သွားတော့မယ်။ ခင်မင်လေးစားလျှက်
>ဟာ…ကိုချမ်းကလဲ တကယ့်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလားလို့ နစ်မျောပြီးဖတ်လိုက်တာ…။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုင်ဒီယာတွေသိပ်ကောင်းပါတယ်မိုးငွေ့လဲ အဲဒီကြော်ငြာလေး ယိုးဒယားလိုင်းမှာကြည့်ဖူးတယ်…။ နောက်ထပ် အာမခံကြော်ငြာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ…မိသားစုသုံးယောက်နဲ့ရိုက်ထားတာ…အဲဒါလေးလဲ သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်…။ခင်မင်စွာဖြင့်မိုးငွေ့
>ဟာဂျာ…အကိုက လူဆိုးပဲ။ ကျွန်တော်က ဂယ်မှတ်နေတာ။ ဟီး ငါ့အကိုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့။ video ကြည့်ပြီးမှ .. အော်ချနိုင်တယ်။ video မပါလို့ကတော့ ..ဟွန်း…သေပြီးဆရာ ပဲ။
>စဖတ်တော့ ဝတ္တုကောင်းကောင်း ဖတ်ရပြီ ထင်လိုက်တာ.. ခံစားချက်က ပီပြင်နေလို့. နောက်တော့မှ … သိသွားတယ်။
>မိုက်တယ် ကိုချမ်းရ..စာရေးတာပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ..ဟူး..တော်သေးတယ်..ဗီဒီယို..
>မိုက်တယ် ကိုချမ်းရေ… ရေးထားတဲ့စာရော ကြော်ငြာရိုက်တဲ့သူရဲ့ အတွေးရော…းဝ)
>ဗီဒီယိုတွေသာမကြည့်မိရင် တခုခုထင်မိတော့ မှာဗျ။ စာသားတွေက သီချင်းရေးထားသလိုမျိုး ထင်မိသေးတယ်။ အပေါ်ဆုံး ဗီဒီယို ကြည့်မိမှ စိတ်ဝင်စားပြီး အားလုံးကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ကူးလေးတွေ ကောင်းပါ့ဗျာ။
>ဖတ်စစချင်းတော့ လူလားလို့ ..နော်ကမှ ပြုံးမိသွားတယ်။
>ကိုချမ်းလင်းနေတယောက် အသဲကွဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းများ ရင်ဆိုင်နေရပြီ ထင်လိုက်တာ လွဲသွားပြီ။
>အကိုချမ်းရေ စာမေးပွဲပီးလို့ အခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ ကြည့်သွားတယ် အကိုသဘောတကျနဲ့ :)Merry Christmas & Happy New Year!!
>ဟားဟား ကိုချမ်းကတော့ လုပ်ပြီ …တော်သေးတာပေါ့..ကြော်ငြာလေးတွေ ကောင်းတယ်ဗျ…